ညမင်းသားနှင့် ညဆန္ဒ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ညမင်းသားနှင့် ညဆန္ဒ	29
Posted by Thint Aye Yeik on Jul 11, 2015 in Creative Writing, Critic, Drama, Essays.., History, My Dear Diary | 29 comments
ညမင်းသားရဲ့ မှတ်စုများ - 2
အိုးးးးးးဗျ. . . ရလဲ့. . .
.ရှေ့မှာ Taxi ငှားဖို့ တားနေပြီ။
ဘက်မှန်ကနေ ဘေးဘယ်ညာကို လှမ်းshow လိုက်တော့လည်း ကျနော်ထက်အရင်ဦးအောင် .ပြေးဝင် ခေါ်တင်မယ့် Taxi ဆိုလို့ တစ်စီးတလေတောင် မမြင်ရ။
ဒါဖြင့် ကျနော် စစထွက်ချင်း .ဈေးဦးပေါက်ဖို့ သေချာသလောက်ပေါ့။ အဟော့။
အင်း။ တားနေတာက အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်။
သူတို့ ပုံစံက ချမ်းသာတဲ့ လူတန်းစားပုံတော့ မပေါက်ဘူး။ တန်ဖိုးကြီးအဝတ်အစားတွေ ဝတ်မထားဘူး။ ခပ်နွမ်းနွမ်းပဲ။
ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထဲက အမျိုးသမီးဖြစ်သူကို မြင်ရတာ တစ်ခုခု ပိုပိုကဲကဲ ဖြစ်နေသလားလို့။ ဘာပိုနေသလဲဆိုတော့ အပြင်အဆင် အခြယ်အသတွေ ပိုနေတာ။ .ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာကြီးနဲ့. . . ပိုပိုသာသာ အလှပြင်ထားတာ သိသာတယ်။
ဒါက သူ့မျက်နှာနဲ့ သူ့လက်ရာ. . .
(ကိုယ်နဲ့ မှ မဆိုင်ရေးချ မဆိုင်တာ)
”ဘယ်သွားမလဲ”လို့ ကျနော် မေးတော့. . .
အမျိုးသမီးက ”စော်ဘွားကြီးကုန်း” တဲ့။
အင်း။ ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံနားကနေ စော်ဘွားကြီးကုန်း ဆိုတော့ ဘယ်လောက် ယူရပါ့။
.ရောက်နေတဲ့နေရာက ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးပေါ်ဆိုပေမဲ့ ဆေးဝါးစက်ရုံလမ်းနဲ့ နီးတယ်။ .ဆေးဝါးစက်ရုံလမ်းထဲကနေ ဖြတ်ထွက်လိုက်တာနဲ့ အင်းစိန်လမ်းမပေါ် – အဲဒီကမှ စော်ဘွားကြီးကုန်း-ဆိုတော့ သိပ်မဝေးဘူးလို့ ပြောနိုင်သလို သိပ်လည်း မနီးလှဘူး။
ဒီတော့ မနည်း မများတဲ့ နှုန်းထားအဖြစ် ”သုံးထောင်ပဲပေးပါ” ပေါ့။
အမျိုးသမီးက ဈေးတောင် မဆစ်ဘူး။ ပေးမယ်ဆိုပြီး ကားပေါ် ဖျတ်ခနဲ ဝင်ထိုင်တယ်။
.အော်. . .
အဲအော် အဲအော်. . .
ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီနှစ်ယောက်က ရန်ဖြစ် စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေကြတယ်။
ကားမထွက်ခင်လေးမှာ အပြန်အလှန် ပြောတဲ့စကားတွေက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စိတ်ပျက်ပြီး ဒေါသထွက်နေတဲ့စကားတွေ။
အမျိုးသားရဲ့ စကားက ချစ်သူကို စိတ်မချ သဝန်တိုတတ်တဲ့ လေသံ။
အမျိုးသမီးကတော့ ဘာတွေ ဒေါသကြီးနေတယ်မသိ။ သူ့ဘဲဘဲကို စိတ်ပျက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ စိတ်တိုဒေါသထွက်နေတဲ့ စကားတွေကို ပြောတာ ပြောတာ ကတ်ကတ်ကိုလန်နေရော။
ကျနော်တောင် ဘာတွေးမိလဲဆိုတော့ ဒီလို မိန်းကလေး(ကိုယ့်ချစ်သူယောက်ျားကို စကားငြင်သာ မပြောပဲ ဟောက်ဟမ်းငေါက်ငမ်းနေတဲ့ /ချစ်သူယောက်ျားကို အရိုအသေမထားတဲ့)မိန်းကလေးမျိုးကိုသာ ကျနော်. . . ချစ်သူတော်မိရင်. . .(ချစ်မိတဲ့ မိန်းကလေးက အဲ့လို စရိုက်သဘာဝ ရှိနေရင်. . .)
ဟူးးး တွေးမိတာနဲ့တောင် အဲ့လို အဖြစ်ကြီးကို စိတ်ပျက်လိုက်တာ။
ဒီမိန်းမရဲ့ ချစ်သူယောကျာ်း အတော် ခံရခက်မှာပဲ လို့။
ကားနောက်မှာ ရပ် ကျန်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ ဘဲဘဲကို ယောကျာ်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာ ကြည့်မိသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် နှစ်ဘက် မျှမျှတတ တွေးရမှာပေါ့။
#ဒီယောကျာ်းဟာ သူ့ချစ်သူမိန်းမရဲ့ ငြူစူစောင့်အောင့်ခြင်းကို ခံရတယ်ဆိုရင်. . .
#ချစ်သူမိန်းမက အရိုအသေမဲ့ဆက်ဆံတာ ခံရတယ်ဆိုရင်. . .
#နင်ဟာ သိပ်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာပဲ လို့. . . ချစ်သူမိန်းမက ပြောတာ ခံရတယ်ဆိုရင်. . .
အဲဒီယောကျာ်းဘက်ကလည်း တစ်ခုခု မှားနေနိုင်တာပဲ။
မိအေး ဘာလို့ အော်သလဲလို့ ဇစ်မြစ်လိုက်ကြည့်ရမှာပဲ။ မိအေးဟာ ဂဏန်းညှပ်ခံရလို့ အော်ရတာပါဆိုရင်တော့ အော်တဲ့မိအေးကို အပြစ်မဆိုသင့်ဘူးပေါ့။
ကျနော် အဲ့ဒီစုံတွဲရဲ့ ”ချစ်မှုရေးရာ ရာသီဥတုအခြေအနေ”ကို ဟိုဘက်ဒီဘက် မျှပြီး တွေးကြည့်နေမိတာာာာ မှားသွားမှန်း လမ်းရောက်တော့မှ သိလိုက်ရတယ်။
တကယ့်အခြေအနေက အဲ့ဒီစုံတွဲမှာ မှားနေတာက. . .
ဘာလို့ အဲလို ကောက်ချက်ချလိုက်နိုင်သလဲ . . . .
ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးပေါ်ကနေ ဆေးဝါးစက်ရုံလမ်းထဲ ချိုးအပြီးမှာပဲ အမျိုးသမီးက ကျနော့်ကို စကားစပြောပါတယ်။
ပထမဆုံးပြောတာက. . .
”အစ်ကို. . .ညီမ ဒီကားထဲမှာ ဆေးလိပ်သောက်လို့ ရပါတယ်နော်”တဲ့။
ဖြစ်ရလေ ဝိုင်းစိန်ရယ်။ စီးကရက်ကို ဗူးလိုက်ကိုင်ထားပြီး မီးခိုးအသည်းပုံဖြစ်အောင် မှုတ်ထုတ် သောက်ချင် နေတဲ့အမျိုးသမီးပါလား။
”ကိစ္စမရှိပါဘူး သောက်ချင်ရင် သောက်ပါ”
စီးကရက်သောက်နေရင်းနဲ့ ဆက်ပြောတဲ့စကားအရ. . .
ဒီမိန်းမ ကားပေါ်မတက်ခင်က သွားမယ်ပြောတဲ့နေရာကို မသွားတော့ဘူးတဲ့။
.စော်ဘွားကြီးကုန်းမသွားတော့ဘဲ မြောက်ဥက္ကလာအဝိုင်းနား သွားမယ်တဲ့။
တိန် တိန် နှစ်ခါတိန်။
”မြောက်ဥက္ကလာအဝိုင်း ဆိုရင်တော့ ၃၀၀၀ က နည်းတယ်”
”ရတယ်။ ၄ထောင် ပေးမယ်”တဲ့။
အဲ့မိန်းမရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းက မြည်လာတယ်။
.နေရစ်ခဲ့တဲ့ အဲ့မိန်းမရဲ့ချစ်သူ. . .
ဖုန်းကိုင်လိုက်ပြီး စကားလက်ခံပြောနေပေမဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့အသံက တမံသလင်းလို မာထန်နေတယ်။
”ဘာလဲ ပြော. . .ပြော” ဆိုတဲ့ စိတ်မရှည် ဖုန်းထူးသံက ဈေးထဲက ငါးစိမ်းတန်းထဲမှာ ငါးသည်တစ်ယောက်. . . ”ငါးတွေလတ်တယ် အမျိုးတို့ရေ. . .”လို့ အော်တဲ့အသံလောက်တောင် နားထောင်လို့ မကောင်းဘူး။
”နင့်ကိုငါ အရမ်းစိတ်ပျက်တယ် သိလား”လို့ ခပ်စွာစွာ အော်နေတဲ့အသံကလည်း အတော် နားအဝင်ဆိုးပါတယ်။
ဟိုဘက်က ဖုန်းဆက်ပြီး ဘယ်နားရောက်နေပြီလဲ မေးတာကို ”မသိဘူး”လို့ ပြန်ပြောတယ်။ ”ဒါပဲမဟုတ်လား”လို့ဆိုပြီး ဇွတ်ကြီး ဖုန်းချလိုက်တယ်။
တအောင့်လောက် အဲ့ဒီမိန်းမဆီက ဘာသံမှ မကြားဘဲ ငြိမ်သွားသလားလို့။
ကားရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းက ဘက်မှန်ကို ကြည့်ရင်းနဲ့ ကျနော် အဲ့ဒီမိန်းမကို ဖျတ်ခနဲ ကြည့်လိုက်တော့. . .
ဗုဒ္ဓေါ. . .
ဒီမိန်းမ ကျနော့်ကို ကြည့်နေပါလားဟ။
သူ့အကြည့်က နည်းနည်းများ ရီဝေဝေဖြစ်နေသလားလို့။ ဘာလဲဟ။ တမျိုးကြီးပဲ။
ဘာသဘောနဲ့များ ကျနော့်ကို မမှိတ်မသုန် ကြည့်နေပါလိမ့်။
ကျနော်က သူ ကျနော့်ကို ကြည့်နေမှန်း သိသွားတာကို သူကသိသွားပြီးနောက်. . .
(အဲ. . .ရှုပ်နေတာပဲ။ ပြန်ရေးမယ်။ )
သူ ကျနော့်ကို ကြည့်နေမှန်း ကျနော်သိသွားတာကို သူ သိသွားပြီးနောက်. . .
သူ့ကို ကျနော် အကဲခတ်လိုက်မိတာကို သူ့ဘာသာပြန် ရိပ်မိသွားပြီးနောက်.
”မင်းက ညပိုင်း မောင်းတာလား”တဲ့။
”မင်းပုံ ကြည့်ရတာ အသက်ငယ်သေးတဲ့ပုံပဲ ညဘက်တစ်ယောက်ထဲ မောင်းတာ မကြောက်ဘူးလား”
”အဲ ဘာကို ကြောက်ရမှာလဲဗျ”
”ခပ်ကြမ်းကြမ်း မိန်းမတွေနဲ့တွေ့ပြီး မင်းကို အတင်းဆွဲစိမှာ မကြောက်ဘူးလား”
တိန်။ သေတော့မှာပဲ။ ဒီမိန်းမ ဘာစကားတွေ ပြောနေပါလိမ့်။
ကျနော် သူ့စကားကို ခပ်ကျယ်ကျယ် အော်ရယ်ပစ်လိုက်ရင်းက ”မိန်းမတွေတိုင်းက ကြောက်စရာ မကောင်းပါဘူး” လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
စိတ်ထဲကတော့ မသိုးမသန့် ဖြစ်နေပြီ။ (မသိုးလည်း မသိုး. . . မသန့်လည်း မသန့်ဆိုတော့ အီလည်လည် အောင့်သက်သက်ကြီးပေါ့)
.မြန်မြန် ရောက်ပါတော့ကွယ်. . .
အဲ့ဒီနောက် မကြာခင်မှာပဲ သူမရဲ့ဖုန်းက မြည်လာပြန်ပါတယ်။
ဟိုဘက်က ဖုန်းဆက်လာသူကို ဒီဘက်က ဖုန်းလက်ခံပြောတဲ့ အမျိုးသမီးက ”အကိုကြီးရယ်”လို့ ပြော ပြောပြီး ချွဲနေလိုက်တာ။
ဖုန်းထဲမှာတင် တရော် ကင်ပွန်းအလုပ်ရုံ ဖွင့်လို့ ရလောက်တယ်။
ဒါဖြင့် ဒီမိန်းမမှာ နှစ်ယောက် ရှိတာပေါ့။ နှစ်ယောက်ကို တပြိုင်တည်း ဆက်ဆံရေး နှစ်မျိုးနဲ့ တွဲနေတာပေါ့။
ဒါဆို ဒီမိန်းမ သိပ်ကြောက်ဖို့ ကောင်းနေပါရောလားဟ။
အဲ ဟုတ်ပါဘူး. . .
လျှာနှစ်ဟောက်နဲ့မြွေခွမ. . .
အာာာ ဒါလည်း ဟုတ်သေးဘူး။
.မြွေနှစ်ဟောက်နဲ့ လျှာခွမ. . .
တိန် တိန် ၂ ခါတိန်
ဟိုမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ တစ်ယောက်ကတော့
သူ့ချစ်သူ မိန်းမဟာ သူ့ကွယ်ရာမှာ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ အီစီကလီ ပြီတီတီ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်ထင်ပါလိမ့်မလဲ။
KTV ကြီး ရှိနေတဲ့ လမ်းကလေးထဲ ခပ်သွက်သွက် ဝင်သွားတဲ့ အဲ့ဒီမိန်းမရဲ့ ခြေလှမ်းတိုင်းဟာ မာယာအပြည့်နဲ့. . .
အဲ့ဒီညဟာ. . .
ကျနော်တို့ ယောက်ျားထုကြီး ဖြစ်စေ. . .မိန်းမထုကြီးဖြစ်စေ. . .
လူတိုင်းလူတိုင်းသည်. . .
.ခြေရှုပ်သော ချစ်သူအတုအယောင်များနဲ့ မကြုံတွေ့ကြပါစေနဲ့ လို့သာ ဆန္ဒပြုခဲ့ရတဲ့ တစ်ညပေါ့. .
9/7/2015/ 08 : 16 AM
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟဲ့
ဟိုလိုဟာတွေ လားးမှ မသိ
Alinsett @ Maung Thura says: ဟုတ်မှာာာာာာာာာာာာာာာာာ
စိတ်ညစ်ထာာာအေ. . .
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဘာရီးမြန်းလား။ သူ့ရီးဇားဆိုတာကကော အဲ့မိန်းမဘာရီးမြန်းလားဆိုတာသိပါ့မလား
Alinsett @ Maung Thura says: မီသိလှောက်ဖူးးးး
Wow says: မထင်နဲ့နော် တချို့ ဘာရီးဆီက ဘာရီးမှန်းသိသိရီးနဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးယူနေတဲ့ ယောက်ကျားတွေရှိတာ…. အာ့ဂျောင့်လဲ ဟိုက ပိုးစိုးပက်စက်နိုင်တာ ဖြစ်မှာ
လုံမလေးမွန်မွန် says: အမလေး… ယောက်ျားပိုင်းလုံးဆိုတာတွေက သဝန်တိုပြိး ပြဿနာရှာတဲ့နေရာမှာ နှစ်ယောက်မရှိဘူး… ကောင်မလေးက ပိုက်ဆံရှိတယ်.. ရုပ်မချောဘူး.. ယောက်ျားကို ပေးပေါင်းတယ်… ပေးလည်းပေးတယ်… ဟောက်လည်းဟောက်တယ်… အထက်ဆီးက ဆက်ဆံတယ်..
ဟိုအကောင်က အဟောက်လည်းခံတယ်… ပေးသမျှလည်းယူတယ်… အောက်ခြေသိမ်းလည်း လိုက်လုပ်ပေးတယ်… သဝန်တိုစကားတွေလည်း ပြောတယ်…
ဒါပေမယ့် ဘယ်သူ့ဘယ်သူကမှ လမ်းခွဲမယ်မပြောဘူး… အဲ့လိုဇာတ်လမ်းမျိုး အနီးကပ်ကြိး သိနေဖူးလို့ ဒေါသတွေ ထွက်ဖူးပါရဲ့…
kai says: ပြည့်တန်ဆာလိုလည်း ..ပြတ်ပြတ်သားသား.. ငွေယူပြီး ထိုက်သင့်တဲ့ဆားဗစ်ပြန်ပေးတာမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်..။
ဂေါတမဗုဒ္ဓခေတ်.. ပုံပြင်တွေထဲ.. ပြည့်တန်ဆာသစ္စာဆိုပြီး ဂင်္ဂါမြစ်ရေဆန်စေတဲ့ဇတ်မှာ.. ပြည့်တန်ဆာက.. သူ့ဖောက်သည်တွေကို.. ငွေယူပြီး.. တန်းတူဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့..သစ္စာဆိုတာတဲ့..။
အခုလို.. အမျှင်တန်းတွေ.. ကြိုးတွေနဲ့.. လှည့်စားနေတာဆို… ပြည်တန်ဆာထက်အောက်တန်းကျတယ်… ထင်..။
Ma Ma says: လူအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရလို့ လူ့သဘောကို နောကြေသွားရင် အဲဒါအမြတ်ပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Alinsett @ Maung Thura says: လူမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရတယ်
သူတို့ဆီက ယာဉ်စီးခ ငွေ အပြင် ရလိုက်တာတွေက
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ကားသမားဖြစ်တာ ကောင်းတယ် ။ ဘ၀အတွေ့အကြုံ စုံတယ်တဲ့
Alinsett @ Maung Thura says: .ရေးစရာတွေလည်း အများကြီးပဲ ရတယ်အစ်မရေ။
ခက်တာက ကုန်ကြမ်းတွေ တောင်လိုပုံပြီး ကုန်ချော ထုတ်လုပ်ဖို့ မအားတာာာ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အလင်းဆက်ရေ ဖျပ်ကနဲ ခဏတွေ့လိုက်တာလေးနဲ့ အတွေး တွေ ဆက်ကုန်ပါပေါ့လား
Alinsett @ Maung Thura says: ဟုတ်ပဗျားးးး
sorrow says: …”ခပ်ကြမ်းကြမ်း မိန်းမတွေနဲ့တွေ့ပြီး မင်းကို အတင်းဆွဲစိမှာ မကြောက်ဘူးလား”.ဆိုတော့ကာ ..ကားဆရာရုပ်လေးက သန့် ပြီးအပြောချိုတာကိုးကွယ်.. .ဆင်ခြင်ရမယ် .အဲ့မျိုးက ဒိန်းဂျား .
Alinsett @ Maung Thura says: မနက်ကတောင် ထိုင်တွေးနေမိသေးတယ်
ကျနော့်ကား ငှားစီးသူ အတော်များများက
ကျနော့်ကို ကြည့်ပြီး အသက် မေးကြတယ်။
ကျနော့်အသက် ၂၈ ပါ ပြောတော့မှ ဟ မငယ်ပါလား လို့ သိကြ
သူတို့က လူကောင်ခပ်သေးသေးနဲ့ ကလေးမတာရုပ်ကလေး အနော့်ကို
တချို့ကတော့ အဲ့မမရီးလို ဖြဲခြောက် ကြည့်သေးတာပေါ့
​ဒေါ် လေး says: မမကြီး ကို နေ့တိုင်း ကြိုပို့ လုပ်ပေး ပါလို့ အော်ဒါ ပေးမသွားတာ ကံကောင်း
Alinsett @ Maung Thura says: အလကားတော့ အကြိုအပို့ မလုပ်နိုင်
ပုံမှန် ကြို ပို့ရမယ်ဆိုရင် ပုံမှန် ကြို ပို့ခသာ ရ
မြစပဲရိုး says: ညမင်းသား တော့ ညမင်းသမီး ဇာတ်လမ်း တွေ နဲ့ မပျင်းရတော့ဘူးပေါ့။
သတိတော့ ထား ဆက်ဆက် ရေ။
ဒီ ဇာတ်လမ်း မှာတော့ ကျန်ခဲ့ တဲ့ မင်းသား က မင်းကားပေါ်က မင်းသမီး ကို ဇွတ်အတင်း ကားပေါ်ပို့ ပြီး ငွေရှာခိုင်း နေတာ ရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
အပြင်ဇာတ်လမ်းတစ်ချို့ မှာ ဆေးစွဲ နေတဲ့ ယောကျာင်္းတွေ အတွက် ပိုက်ဆံ ကို မရရ အောင် စိတ်မပါလဲ ဒီ အလုပ် ကို လုပ် နေရ တဲ့ မိန်းမ တွေ ရှိတယ်။
အဲဒီ လူ ကို လဲ မစွန့်နိုင်တော့ စိတ်တို ချိန် အော်ရင်း ငေါက်ရင်း မကြိုက်ပေ မဲ့ ငွေရဖို့ လုပ်ပြီး နစ် နေကြတဲ့ ဘဝ တွေ ကို Documentary တစ်ခုထဲ ကြည့်ဘူးတယ်။
မတူတဲ့ တစ်ဖက် view ဗျူးပေါ့။ :-)))
Alinsett @ Maung Thura says: ဒါလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ လူ့ဘဝ ဇာတ်ခုံ အစုံစုံပါပဲ အရီးမြရေ
Mike says: .ညဖက်မောင်းတာဆိုတော့ ဟိုဟာတွေ တွေ့ဖို့ချန့်စ် များတယ်..
.မှတ်ချက်။ ဟိုဟာ= အမူးသမား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Alinsett @ Maung Thura says: အမူးသမား မဟုတ်တဲ့ ဟိုဒင်းတွေလည်း တွေ့တယ်
ဟိုဒင်း=လမ်းပေါ်က အရူးတွေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော် ငှားစီးတဲ့ကားဆရားလေးပြောတာတော့
တစ်ည တာမွေ ကြက်ဈေး က ကျိုက္ကဆံ ကုန်းကျော်နားကို သုံးထောင်နဲ့ တင်လာသတဲ့။
ကားပေါ်ရောက်မှ အဲ့ လူက မူးနေတာကို သိသတဲ့။
ကားပေါ်က ဆင်းတဲ့ အခါ ကားခ တောင်းတော့ ငါးထောင်တန်ပေးပြီးသား
သူ့မှာ အတော်ရှင်းလိုက်ရ ဆိုဘဲ
Alinsett @ Maung Thura says: အဲ အဲ့လိုအဖြစ်လည်း တခါကြုံဖူးပါတယ်။
ကားခ မပေးရသေးဘဲနဲ့ တက်တက်ချင်းပေးလိုက်တာချည်း စွတ်ငြင်းတာာာာ
မပေးရသေးကြောင်း အထပ်ထပ် ပြန်ငြင်းနေခဲ့တဲ့အဆုံး
သူက ပိုက်ဆံ ထုတ်ပေးရင်း ပြောသွားတယ်။
နှစ်ခါပေးရတယ် အေးလေ ကုသိုလ်ရတာပေါ့ တဲ့
ဦးကြောင်ကြီး says: မိုဘိုင်းဗိ ဖွင့်ဆားပါရား..
Alinsett @ Maung Thura says: ဆိုးဘူးနော့ အိုက်ဒိအကြံ
အောင် မိုးသူ says: ဒညင်းဝက်က ပျော့်စိစိသွားလုပ်တော့ ဟိုက ခပ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ ဆွဲမစိလိုက်တာ ကံကောင်း ဟိဟိ။
Alinsett @ Maung Thura says: နာ ပျော့စိစိ ဆိုတာ
နီ မာတောင့်တောင့်သလောက်တော့ ရှိတယ်မှတ်ထားစမ်းဘာာာာ
တောတွင်းပျော် says: အနော့ချစ်ချစ်လေးနဲ့ 
လမ်းကြုံရင် ကားတားစီးချင်လို့ 
ကားနံပါတ်လေး ကျေးဇူးပြုပြီး တစ်ချက်လောက်..
နောက်ပြီး တစ်သိန်းကျော်တန်ဖုန်းလေး ဘယ်နား
အချင်းချင်းမို့အားပေးရအောင်လို့ နော်..
Alinsett @ Maung Thura says: တိန် တိန် ၂ ခါတိန်
ကားနံပါတ်က ဘလောက် ဘလောက်